တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာန ၁၃ ခုတွင် ၇၉၈၈ ဦး ဝင်ရောက်ြေ?? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာန ၁၃ ခုတွင် ၇၉၈၈ ဦး ဝင်ရောက်ြေ??
ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ၂ဝ၁၈ ခု နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အတွက် ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင် အထက (၁/၂/၃/၄/၅/၆) စာစစ်ဌာန များ၊ မြို့နယ်အတွင်းတွင် အထက- ဇောင်းတူစာစစ်ဌာန၊ အထက-ကျောက်တန်းစာစစ်ဌာန၊ အထက- ထန်းတောကြီးစာစစ်ဌာန၊ အထက- ထုံးကြီးစာစစ်ဌာန၊ အထက-ပျဉ်ပုံ ကြီးစာစစ်ဌာန၊ အထက-ဘုရားကြီး စာစစ်ဌာနနှင့် အထက- အင်းတ တော်စာစစ်ဌာနဟူ၍ စာစစ်ဌာန ၁၃ ခု ထားရှိပေးထားပြီး တက္က သိုလ်ဝင်တန်းအတွဲ (၁/၂/ ၇) တို့တွင် အတွင်း/အပြင်မှ ဝင် ရောက်ဖြေဆိုရန် ၇၉၈၈ ဦး စာ ရင်းပေးသွင်းထားပြီး မြို့နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးမှ အဆင့်ဆင့်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
”စာမေးပွဲမဖြေခင်ကတည်း က ညစာကျက်ဝိုင်း၊ အချိန်ပို မေး ခွန်းဟောင်းလေ့လာချက် ဘာသာ ရပ်ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ညနေခင်းလေ့ ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ကလေးတွေဟာ အဝေးကို သွားမဖြေရဘဲ မိမိကျောင်းမှာပဲ ဖြေရမှာပါ။ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ ကတော့ အခြားကျောင်းတွေက ဆ ရာကြီး၊ ဆရာမကြီးတွေက တာဝန် ယူဆောင်ရွက်မှာပေါ့။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေစဉ်ရက်အတွင်း ပြဿနာ နှင့် အခြားအခက်အခဲတွေမရှိအောင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်း ညွှန်မှုနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေ အဆင် ပြေချောမွေ့အောင် ပူးပေါင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်”ဟု ဒုတိ ယမြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဆရာကြီး ဦးအေးသိန်းက ပြောသည်။
ယခင်နှစ်က ပဲခူးမြို့နယ်အ တွင်း စာစစ်ဌာန ၁၂ ခုသာထား ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ဇောင်းတူ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အထက-ဇောင်းတူစာစစ်ဌာနတစ်ခု တိုးချဲ့ထားရှိပေးပြီး အဆိုပါစာစစ် ဌာနတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူ ၁ဝ၇ ဦး လာရောက်ဖြေဆို ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသားဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လည်ပတ်ပြီး မြဝတီ-မဲဆောက် ဝင်ထွက်ဂိ?
ခါရှိုဂျီ အသတ်ခံရမှုတွင် လူသတ်သမားများကို ဆော်ဒီအစိုးရ ဖမ်းဆီးထားပါက တူရကီသို့ လွှဲပြောင်းပေ